News - ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် hula hoop ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဘာလဲ။
hula hoop သည်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အဆင်ပြေရုံသာမကခါးနှင့် ၀ မ်းဗိုက်၏စွမ်းအားကိုပါလေ့ကျင့်သည်၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာရရှိနိုင်သည်၊ အမျိုးသမီးသူငယ်ချင်းအများစုသည်အလွန်ချစ်ခင်ကြသည်။ အောက်ပါတို့သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် hula hoop ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက် hula ကွင်း၏အခန်းကဏ္.ကို
ခန္ဓာကိုယ်သည် hula hoop ကိုလှည့်သောအခါ psoas အဓိကကြွက်သားအားအင်အားအမှတ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျောကြွက်သားများနှင့်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများကိုအတူတကွအားစိုက်ထုတ်ရန်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နက်ရှိုင်းသောကြွက်သားများကိုအပြည့်အဝစုစည်းရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည့် hula hoop တစ်ခုဖြစ်ပါကအလေးချိန်တိုးလာလိမ့်မည်။ ခြားနားချက်မှာအမြန်နှုန်းဖြင့်လှည့်နေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိဝန်များသည်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုတဖြည်းဖြည်းပိန်လာစေသည်။
အဆိုပါ hula ကွင်းသည်ခါးနှင့်ဝမ်းဗိုက်ကိုလှည့်ပတ်သွားသည်။ ၎င်းသည်ခါးနှင့်ဝမ်းဗိုက်အပေါ်အနှိပ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အူ၏ peristalsis ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးချုပ်နှောင်ခြင်းပြsolvingနာကိုဖြေရှင်းသည်။
3. ထွင်ထားတဲ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို Adjust
အချို့အမျိုးသမီးများသည်ကလေးမွေးဖွားပြီးသည်နှင့်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအထူးသဖြင့်တင်ပါးဆုံတွင်းများလျော့နည်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်အဆီများစုပုံလာခြင်း၊ ဤဖြစ်ရပ်တွင်အလေးချိန်လျှော့ချရန်နှင့်ခါးကိုခါ။ လှုပ်ရန် hula hoop ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် pelvis ကြွက်သားများကိုလေ့ကျင့်နိုင်သည်။ သင်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလေ့ကျင့်ပါကတင်ပါးဆုံတွင်းနှင့်နောက်ကျော ပို၍ တင်းကျပ်လာလိမ့်မည်။
သင် hula ကွင်းကိုလှည့်သောအခါ၊ စည်းချက်ညီသောအသက်ရှူမှုဖြင့် ၁၀ မိနစ်ခန့်တွင်ကယ်လိုရီ ၁၀၀ စားသုံးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်မိနစ် ၂၀ ကျော်ကြာအောင်ကပ်ပါကအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပိုကောင်းသည်။
hula ကွင်းဆက်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းနေဆဲအချို့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။ အချို့မိန်းကလေးများက Hula ကွင်းကလေးလံလေ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည်ထက်ပိုကောင်းသည်ဟုထင်သော်လည်းဤသည်မှာအမှန်တကယ်မမှန်ကန်ပါ။ အဆိုပါ hula ကွင်းအလွန်လေးလံသည်နှင့်လှည့်သည့်အခါလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအများကြီးလိုအပ်သည်။ ထခြင်း၊ ရှည်လျားသောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်လေးလံသောကိုယ်အလေးချိန်သည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောဝမ်းဗိုက်နှင့်နောက်ကျောအတွင်းပိုင်းအင်္ဂါများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
နည်းလမ်း ၁။ တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်လေ့ကျင့်ပါ၊ တစ်ခုစီသည်မိနစ် ၃၀ ကျော်ပါ
လေ့ကျင့်ခန်းပမာဏ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် hula hoop ကိုလှည့်ခြင်းသည်ကြီးမားသည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်နာရီဝက်ခန့်ကြာသည်။ ၁၀ မိနစ်အတွင်းတွင်၎င်းကိုနွေးထွေးသောအခြေအနေအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ တစ်ပတ်လျှင် ၃ ကြိမ်သာတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုပါကအဆီနှင့်ကယ်လိုရီများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်ရည်မှန်းချက်ကိုသင်အောင်မြင်နိုင်သည်။
နည်းလမ်း ၂။ အလယ်အလတ်အလေးချိန်ရှိသော hula hoop ကိုရွေးချယ်ပါ
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း hula hoop သည်ပိုမိုလေးလံသောကိုယ်အလေးချိန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအယူအဆသည်မှားသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုနှင့်သေးငယ်သောအနေအထားရှိသောမိန်းကလေးများအတွက်ပိုမိုလေးလံသော hula hoop ကိုအသုံးပြုသည့်အခါအစတွင်လည်ပတ်ရန်အတွက်များစွာကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ သူ၏ခွန်အားသည်အားစိုက်ထုတ်လေ့ရှိသည်။ သင်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းလေ့ကျင့်ပါကဤခဏတာအားစိုက်ထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းသည်မေ့ဆေးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်လာသည်။ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးသင်နာကျင်မှုခံစားရစေသည့်အပြင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုလုံးဝမရှိချေ။ hula hoop ၏သက်ရောက်မှုကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဒဏ်ရာများကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်လျော်သောအလေးချိန်ရှိသော hula hoop ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
နည်းလမ်း ၃။ သင့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရ hula hoop weight loss နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ
hula ကွင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ကူညီသော်လည်း၎င်းသည်အားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ လူများ ။ အဆိုပါ hula ကွင်းလည်ပတ်အဓိကအားခါး၏ခွန်အားပေါ်တွင်မူတည်သည်, ထိုသို့ကြာမြင့်စွာကြာပါသည်။ သင့်တွင် lumbar ကြွက်သားမျိုးသို့မဟုတ်ကျောရိုးပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အရိုးပွရောဂါဖြစ်ပွားနေသောသက်ကြီးရွယ်အိုများရှိပါကမလိုအပ်သောပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ဤလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင် hula hoop ကိုလှည့်ခြင်း၏လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်မှုသည်အားမနည်းသော်လည်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းကြွက်တက်ခြင်းနှင့် qi ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်လည်ပတ်ခြင်း၊ လည်ပင်း၊ ခါးနှင့်ခြေထောက်များ၏ကြွက်သားများကိုလှည့်ခြင်း၊
လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်မှုနှင့်လူအစုအဝေးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်: ခါးလည်ပတ်လေ့ကျင့်ခန်းအလယ်အလတ်လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်မှုဖြစ်ကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ၊ ခါးနှင့်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားသန်စွမ်းခြင်း၊ အဆီခန္ဓာကိုယ်ရှိလူလတ်ပိုင်းအရွယ်များ၊ ခါးတွင်အဆီများပြားသောအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုအားဖြင့်တိုင်းတာသောခါးပတ် ၀ န်းကျင်ပိုများသူများ။ ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုသတိထားသင့်သည်။ ဒါဟာ lumbar hyperostosis နှင့် lumbar disc ကိုအူကျရောဂါနှင့်အတူလူနာများအတွက် contraindicated ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သွေးတိုးရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါရှိသောလူနာများအတွက်မသင့်တော်ပါ။
hula ကွင်းသည်လှုပ်ခါခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့်ခါးတွင်မှီသောကြောင့်၎င်းသည် psoas၊ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် psoas ကြွက်သားများကိုအပြည့်အ ၀ လေ့ကျင့်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်ခါးကိုတင်းစေနိုင်သည်။ သို့သော်သတိပြုသင့်သည်မှာ lumbar ကြွက်သားမျိုး၊ ကျောရိုးဒဏ်ရာ၊ အရိုးပွရောဂါလူနာများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ဤလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ဒါ့အပြင် hula hoop ကိုမလှုပ်ခင်ကန့်လန့်မန့်ကိုရှောင်ဖို့အရွတ်များကိုဆန့်ထုတ်ဖို့ဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်သင့်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းသည်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ရက်မျှမဟုတ်ဘဲအဝလွန်ခြင်းသည်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ရက်ကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးမှာပဲလုပ်လုပ်၊ ရှည်လျားပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်၊ အနည်းငယ်ရှူရှိုက်မိသော်လည်းအလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည့်နိယာမတစ်ခုကိုနားလည်ရန်သတိရပါ။ မကြာမီသင်သည်သွယ်လျသည့်မိသားစု ၀ င်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
Hula Hoop အေရိုးဗစ်
နောက်ဘက်နောက်ဖက်ပုံစံ - အဓိကပစ်မှတ် - လက်မောင်း၏အထက်လက်၊ ခါးနှင့်နှစ်ဖက်စလုံး
၁။ သင်၏ခြေထောက်ပခုံးအကျယ်ကိုဆန့်ထားပြီးသင်၏လက်များကို ၃ နာရီနှင့် ၉ နာရီနောက်တွင်ထားပါ။ hula ကွင်းကိုကိုင်ထားပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ ၃၀ စင်တီမီတာအကွာတွင်ရှိသည်။ သင်၏ရင်ဘတ်ကိုရှူရှိုက်ပါနှင့်သင်၏ပခုံးဓါးများကိုခေါက်တင်ရန်ကြိုးစားပါ။
2. ဘယ်ဘက်လက်သည်ခေါင်းနှင့်အထက်သို့လက်ျာလက်နှင့်တင်ပါးဆုံရိုးနောက်သို့မရောက်မှီတိုင်အောင် hula hoop ကိုလက်ယာရစ်ဖြင့်လှည့်ပါ။ ၁၀ စက္ကန့်ကြာအောင်ကိုင်ထားပါ၊ ဖြည်းဖြည်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်ပါ၊
၃။ ကန ဦး အနေအထားသို့ပြန်သွားပါ။ လက်ျာလက်ခေါင်းကိုအထက်သို့တင်ပြီးဘယ်ဘက်လက်ကိုတင်ပါးဆုံရိုးနောက်သို့မထားမှီတိုင်အောင် hula hoop ကိုလက်ယာရစ်ဖြင့်ဖွင့်ပါ။ ၁၀ စက္ကန့်ကြာအောင်ကိုင်ထားပြီးဖြည်းဖြည်းနှင့်နက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်ပါ၊ ထို့နောက်မူလအခြေအနေသို့ပြန်သွားပါ။
နောက်ကျော၊ လက်နက်နှင့်ပခုံး - ရှေ့သို့ - အဓိကပစ်မှတ်ကိုတင်
၁။ ပေကြိုးအကျယ်ကိုဆန့်ကျင်။ မတ်တပ်ရပ်ပါ။ Hula ကွင်းကိုလက်နှစ်ဖက်စလုံးကို ၁၀ နာရီနှင့် ၂ နာရီအသီးသီးစီကိုင်ထားပြီးလျှင်သင်၏ခြေထောက်ရှေ့တွင်ထားပါ။ ဒူးထောက်လိုက်၊ ဒူးထောက်။ ထိုင်။ ၁ မီတာခန့်မြေပြင်ပေါ်တွင်ရပ်ပါ။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့ hula hoop ကိုသုံးပြီးသင့်လက်တွေကိုရှေ့ကိုဖြောင့်တန်းပြီးဆန့်ထားပခုံးတွေခံစားရတယ်။
၂။ သင်၏ဝမ်းဗိုက်ပေါင်နှင့်နီးကပ်သည်အထိသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှေ့သို့ ဆက်၍ တိုး။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏ကျောရိုးနှင့်ကျောရိုးနှေးကွေးစွာရှည်လျားနေသည်ဟုခံစားရပြီးသင်၏လက်မောင်းကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှေ့ဆန့်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ၊ လည်ပင်းကိုအနားယူပါ၊ ၁၀ စက္ကန့်ကြာကိုင်ထားပြီးနောက်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရပ်ပါ။
မတ်တပ်ရပ်ပြီးခါး - အဓိကပစ်မှတ်များ - ဗိုက်၊ ပခုံးနှင့်နောက်ကျောကိုလှည့်ပါ
1. hula ကွင်းခါးပတ်ပတ်လည်, ဘယ်ဘက်သို့မဟုတ်ညာဘက်လှည့်ပါစေ။
၄။ ၃ မိနစ်လှည့်ပြီးနောက်ရပ်ပါ။ ထို့နောက်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ၃ မိနစ်လှည့်ပါ။